Madaxweyne Obama oo Sheegay Inay Tilaabo ka Qaadayaan Dalka Ruushka (VIDEO) - Hablaha Media Network
Madaxweyne Obama oo Sheegay Inay Tilaabo ka Qaadayaan Dalka Ruushka (VIDEO)
HMN:- Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa Sheegay in Maraykanku uu tilaabo ku haboon ka qaadayo dalka Ruushka, kadib markii qubarada Ruushka ay weerar dhanka Internetka ku qaadeen Xisbiga Dimoqoraadiga ee dalka Maraykanka si ay wax uga beddelaan doorashadii Donald Trump iyo Hillarey Clinton.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in qayb ka mid ah talaabada ay qaadayaan ay noqon doonto mid cad oo dadku arkayaan, halka qaar kale ay noqonayaan kuwo qarsoodi ah, sidaas waxa uu ka sheegay Raadiyaha NPR (National Public Radio) oo waraysi la yeesha.
Aqalka Cad ee dalka Maraykanka iyo hay’adda sirdoonka CIA ayaa aaminsan in Madaxweynaha Ruushanku Vladamir Putin uu shakhsi ahaan u maamuley qoraaladii Hacker-sku ay ka xadeen xogta Maraykanka halkii lagu keydinayey.
Obama ayaa sheegay in sababta Ruushanka ku xanbaartey weerarkan iyo in Aqalka Kremlin-ku uu faraha la galaan Dimoqraadiyadda dalka Maraykanka ay tahay in ay taageeraan Donald Trump, Trump laga doonayo inuu ogaado farogelinta qaawan ee dowldaha shisheeye.
Dalka Ruushanka ayaa iska fogeeyey eedeynta, waxaana ay ku tilmaameen wax lagu qoslo eedaymaha ka soo yeeray dalka Maraykanka.